कति पुग्यो चीनमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ? - Dainik Online Dainik Online
कति पुग्यो चीनमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ?
प्रकाशित मिति : ८ फाल्गुन २०७६, बिहिबार ७ : ५२
चीन । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट चीनभरी मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या दुई हजार ११८ पुगेको चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बिहीबार जनाएका छन् ।
गत मङ्गलबार एकै दिनमा यस भाइरसको सङ्क्रमणका कारण १३६ जनाको मृत्यु भएको एपी समाचार समितिले बुधबार जनाएको थियो । बुधबारको दिन यस भाइरस सङ्क्रमणको कारण ११४ जनाको मत्यु भएपछि यस प्रकोपबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २ हजार ११८ पुगेको समाचारमा जनाइएको छ।